Qorshe Istiraatiijiyadeed - Dugsiyada Dadweynaha ee wali ku nool aagga degmada ee loo yaqaan ISD 834
Hadafka Dugsiyada Dadweynaha Stillwater Aagga, oo ay iskaashanayaan ardayda, qoyska iyo bulshada, ayaa ah horumarinta shakhsiyaadka xiisaha leh ee firfircoon kuna hawlan hoggaamiyeyaasha adduunyada isbaddelaysa abid iyada oo loolan adag la gelayo dhammaan ardayda markay ku safrayaan dariiqyadooda waxbarasho ee shakhsiga ah.
Go'aan gaaristayada waxaan had iyo jeer ka fiirsan doonaa waxa la jecel yahay, loo siman yahay, ee macquul ah iyo kuwa sii jiri kara. Waxaan dhisi doonaa xiriiro aan la yeelano saamileydayada oo aan la falgalno bulshadayada.
Dhammaan carruurta ayaa diyaar u ah dugsiga
Dhammaan ardayda dhigata fasalka saddexaad waxay aqrin karaan heerka darajada
Dhammaan goldaloolooyinkii midab takoor iyo dhaqaale waa la xiray
Dhammaan ardayda waxay diyaar u yihiin shaqo iyo kulliyad
Dhammaan ardayda waxay ka qalin jabiyaan dugsiga sare
* Dhamaan ardayda waxay ku howlan yihiin waxbarashadooda
* Dhammaan ardayda waxaa laga taageeri doonaa horumarintooda bulsho, shucuur iyo dabeecad
* Dhammaan ardayda waa la arki doonaa, waa la adeegi doonaa waana la taageeri doonaa
* Yoolalka u gaarka ah biyaha
Abuuritaanka Shaqaalaha Adduunka ugu Fiican
Ujeeddooyinka Qorshayaasheena Istaraatiijiyadeed waxay ku saleysan yihiin aagagga lagu caddeeyey Shaqaalaha Adduunka ugu Fiican. Sannad kasta, xubnaha guddiga iskuulkayaga iyo shaqaalaha degmadu waxay u wada shaqeeyaan si loo dejiyo yoolalka mid kasta oo ka mid ah shanta goobood ee xoogga la saarayo. Yoolalka ayaa u dhaxayn kara hal ilaa saddex sano oo dherer ah.
Yoolalka Gaarka ah ee Gaarka ah
Bilowga sanad dugsiyeedka 2020-2021, 80% ardayda xanaanada caruurta ee kaqeyb galay SAPS preschool waxay muujinayaan u diyaar garowga iskuulka, iyadoo lagu cabirayo dhibic 34 ah ee buundada akhriska hore ee Fastbridge.
Natiijada 2019-2020: 70% at 34 ama wixii ka sareeya
Marka la gaaro Juun ee 2021, ardayda fasalka seddexaad waxay kulmaan aqoonta dhamaadka sanadka, sida lagu qiyaaso aqrinta MCA, waxay ka kici doonaan 58.7% ilaa 60.7%.
Natiijada 2019-2020: Lama sheegi karo maadaama MCAs aan lasiin faafin awgeed.
U fiirso Akhriso Si Wanaagsan Qorshaha Fasalka Saddexaad / Qorshe Akhriska Deegaanka
Marka la gaaro Juun ee 2021, 72.5% xisaab iyo 74.5% aqrinta DHAMMAAN kooxaha ardayda ayaa muujin doona Dhexdhexaad ama Kobcin Sare sida lagu qiyaaso akhriska iyo xisaabta MCA.
Arag Qorshaha Kasbashada & Isdhexgalka 2020-2023
Marka la gaaro Juun ee 2021 54% ardayda qaadata ACT waxay noqon doonaan "on-track" guusha, sida lagu muujiyey iyadoo la gaarayo dhibco isku dhafan oo ah 23 ee ACT.
Natiijada 2019-2020: Lama soo sheegi karo faafa awgeed.
Marka la gaaro Juun ee 2021, heerka qalin-jabinta 4-sano ee Stillwater wuxuu noqon doonaa ugu yaraan 95.5%.
Natiijada 2019-2020: Natiijooyinka rasmiga ah weli lama helin.
Bulshadeenu waxay aaminsan tahay in ladnaanta bulshada iyo shucuurta ay muhiim u tahay guul gaarista tacliinta. Waxaa naga go'an inaan jabinno caqabadaha badan ee hor istaagi kara waxbarashada si loo hubiyo in ardaydeena ay noqon karaan kuwa ugu fiican. Marka lagu daro shanta aag ee WBWF, qorshaheena istiraatiijiyadeed waxaa ka mid ah hadafka degmada oo dhan oo ay weheliso seddex ujeeddo oo wax looga qabanayo marin u helka, fursada iyo hanashada waxbarasho ee DHAMMAAN ardaydeena.
Dhammaan ardayda waxay ku hawlan yihiin waxbarashadooda
Dhammaan ardayda waxaa laga taageeri doonaa horumarintooda bulsho, shucuur iyo dabeecad
Dhammaan ardayda waa la arki doonaa, waa la adeegi doonaa waana la taageeri doonaa
Sawirkayaga Qalin-jabinta wuxuu qeexayaa xirfadaha iyo sifooyinka aan ka fileyno ardaydeena inay ku horumariyaan khibradooda iskuuladeena. Marka laga shaqeynayo ujeedooyinka qorshaheena istiraatiijiyadeed, macallimiinta iyo shaqaaluhu waxay raadiyaan habab ay ku daraan waayo-aragnimada u oggolaaneysa ardayda inay ku dhaqmaan kuna horumariyaan xirfadahan heerarka oo dhan - laga bilaabo preK illaa dugsiga sare.
Fikir Halis ah
Waxay dhistaa xiriiro adag
Si wax ku ool ah oo xushmad leh ula shaqeeya kooxo kala duwan
Wuxuu raadiyaa fikrado iyo aragtiyo kala duwan
Wuxuu qiimeeyaa tabarucaadka shaqsiyeed ee uu sameeyay xubin kasta oo koox ah
Waxay muujisaa naxariis dadka kale
Wuxuu xaliyaa dhibaatooyinka adag
Kala soocaa macluumaadka saxda ah
Sababaha si wax ku ool ah u sameeya xukunno iyo go'aanno hufan
Geesinimo, waxay qaadataa khatar waxayna wax ka barataa guuldarada
Maskax furan oo ka jawaab celisa aragtiyaha cusub iyo kuwa kala duwan
Is rogrogmi kara oo la qabsan kara jawiga iyo xaaladaha cusub
Si taxaddar leh ayaa loo tixgeliyaa fikradaha si loo hagaajiyo loona kordhiyo dadaallada hal-abuurka
Waxay si hufan isugu muujiyaan isgaarsiinta qoraalka iyo hadalka labadaba
Si firfircoon ayuu u dhageystaa dadka kale
Waxay muujisaa faham dhaqameed iyo wacyigelin caalami ah markay la macaamilayso dadka kale
Dadka kale wuxuu ula dhaqmaa si naxariis iyo ixtiraam leh
Waxay ku sii jirtaa xiisaha waxayna jeceshahay inay barato waxyaabo cusub
Wuxuu fahmaa awooda qofka iyo meelaha laga kori karo
Dhiirigelin iyo kalsooni leh
Waxay raacdaa damacyadooda iyo danahooda